မင်း၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MaleokMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ မင်း's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
7:29am အချိန်July 29, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
ဂျ ပိုး ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ရဲမင်းထွန်း ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ashinkovida ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
KO KO ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ခံယူ ယူဆလျင် ဗုဒ္ဓအကြောင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ထိ သိသင့်သည် ဟု ယူဆရပါသည်။ မည်သည့်ဘာသာတွင်မဆို သဒ္ဓါတရားသည် အခြေခံတရားဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည့်အလျောက…
Top News · Everything ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ liked dimplemit's blog post 'စက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ'3 minutes agoashinkovida replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'"ကလေးတို့ဆရာမပြောတာဟုတ်ပါတယ် သီလဆိူတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်တော့ အခြေခံကျင့်သုံးရမယ့်တရားပါပဲ…"3 minutes agodimplemit leftacomment for Htain Lin Oo"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"10 minutes agoHtain Lin Oo ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်12 minutes ago ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
နိုင်ရန်အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်......အေးချမ်းစွာ တရားဓမ္မ များကိုရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါစေ....။ ဖိုးကံထူး commented on မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'"ဟုတ်ပါတယ် ခြေထောက်ကခံစားလို့မရတာ မနောကခံစားတာကိုညဏ်နဲ့ကြည့်တာလား…"17 minutes agoaung aung soe commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝ'"ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်"17 minutes agoaung aung soe commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံလာရင်...'"ကျေးဇှုးတင်ပါတယ်"31 minutes agoရဲမင်းထွန်း leftacomment for hla moe 24"ဟုတ်ကဲ. လှူကြတာပေါ.အကို လှူမယ်. အစီအစဉ်ကိုပြောပါခင်ဗျာ....
ိ"55 minutes agohla moe 24 leftacomment for ရဲမင်းထွန်း"ညီရေ ဝါဆိုမှာ စုပေါင်းလှူကြရအောင်ဟေ့"58 minutes agohla moe 24 leftacomment for ရဲမင်းထွန်း58 minutes agohla moe 24 leftacomment for ရဲမင်းထွန်း"ညီရေ ဝါဆိုသင်္ကန်း စုပေါင်းလှူကြရအောင်"58 minutes agoKyi Maung commented on ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫'s blog post 'ကျမနှင့် နောင်တ ..'"နောင်တများစွာ ဖြင့် အမှားတစ်ခု အတွက် ပူဆွေးနေမည်ဆိုပါလျှင် လက်၇ှိအချိန်တွေကိုပါ အကျိုးမဲ့…"1 hour ago More... RSS